Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Dowladda » Waa maxay sababta Xoghayaha Guud ee UNWTO Zurab Polokashvili aan si habboon loo dooran?
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Wararka Shiinaha • Wararka Dowladda • News • Dadka • Wararka Spain • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
22 min akhris
4 sano kadib, waxay si lama filaan ah u caddahay in doorashadii 2017 ee Xoghayaha Guud ee UNWTO aysan ahayn mid habboon. Zurab Pololikashvili waa inuusan noqon Xoghayaha Guud ee hadda. Waxaa jiri kara fursad ah in Shirka Guud ee soo socda ee Morocco, qaladkan la saxi karo.
Waxaa jira laba tallaabo oo lagama maarmaan ah in la raaco habka doorashada Xoghayaha Guud ee UNWTO, labadoodana si sax ah looma raacin 2017 -kii.
TALLAABADA KOOWAAD waa doorashada Golaha Fulinta ee UNWTO oo ka dhacday Madrid 10 -kii Maajo, 2017. Xeerarkii qaanuuniga ahaa iyo hab -dhaqankii loo aasaasay ururrada ayaa la jebiyey.
TALLAABADA LABAAD: Qodobka 22aad ee Xeerarka Ururka wuxuu leeyahay: “Xoghayaha Guud waxaa ansixin doona saddex meelood laba meel inta badan xubnaha buuxa ee soo xaadira oo ka codeeya Golaha soo jeedinta Golaha, muddo afar sano ah… ” ("xubno buuxa”Waxaa loola jeedaa dawlado madax -bannaan). Xeerarka qaanuuniga ah iyo dhaqammada loo dejiyay ururka ayaa si cad loogu xadgudbay.
Talo soo jeedinta kalfadhiga 105aad ee Golaha Fulinta ee UNWTO si loogu soo jeediyo Mr. Zurab Polokashvili oo ka socda Georgia inuu noqdo Xoghayaha Guud si uu ugu guuleysto Dr. Taleb Rifai oo ka soo jeeda Urdun waa inay noqotaa mid aan sax ahayn maadaama hab-raacyadii iyo qawaaniintii habboonaa si xun loo jabiyay. La-taliyaha sharci ee UNWTO iyo qareenka Ms. Gomez ayaa si xun u si xun ula taliyay Dr. Taleb Rifai oo ku tiirsanaa qiimaynteeda.
Xaqiijinta Mr. Pololikasvili ee XXII Golaha Guud ee UNWTO oo lagu qabtay Chengdu, China bishii Sebteembar 13-16, 2017 qiraalku wuxuu ahaa mid aan sax ahayn oo si cad u jebiyey qawaaniin la aasaasay oo ku tiirsan hadallada xaasidnimada leh ee qareenka UNWTO iyo la-taliyaha sharciga Marwo Alicia Gómez
Marwo Alicia Gómez ayaa weli u shaqaysa Ururka Dalxiiska Adduunka iyada oo ah la taliye sharci waxaana loo dalacsiiyay jagadan ka wanaagsan waxyar kadib markii Mr. Pololikasvili uu xafiiska qabtay bishii Janaayo 2018.
Caan iyo waayeel eTurboNews Ilo aad u yaqaan arrinta ayaa falanqeeyay sharraxaadda Professor Alain Pellet, oo hore u ahaa la -taliyaha sharciga ee UNWTO.
Sharaxaadda Pellet ee ansaxnimada dood ku saabsan soo jeedinta murashax ee dal ka tirsan UNWTO ayaa sharraxaysa xaaladda musharraxa tartamaya Alain St. Ange uu ku jiray.
Dhanka kale, Alain St.Ange waxaa lagu abaalmariyay in ka badan hal milyan oo Rupee Seychelles ah in si qaldan looga saaray doorashadii UNWTO. Xil ka qaadistiisu waxay si cad u caawisay Mr. Pololikasvili inuu guulaysto.
Sida ay soo sheegeen eTurboNews 4tii sano ee la soo dhaafay, waxaa jira arrimo badan oo aan joogto ahayn oo daabacaadan loogu yeeray khiyaano, wax isdaba marin, iyo wax ka badan.
Waxaa jirta fursaddii ugu dambaysay ee lagu saxi lahaa khaladaadka qaarkood.
Indhaha oo dhami waxay eegayaan Shirka Guud ee dhowaan ka dhacaya Marrakesh, Morocco dhammaadka Nofembar.
Sidee tallaabooyinka loo igmaday aan loo raacin doorashadii 2017?
Sida hore loo tilmaamay, waxaa jira laba talaabo oo geedi socodka doorashada Xoghayaha Guud ee UNWTO
Labadan tallaabo ee doorashada midkoodna lama raacin si waafaqsan xeerarka qaanuuniga ah iyo hab -dhaqanka ururka ee la aasaasay.
Waa tan sida.
Talo soo jeedinta Golaha Fulinta
Xeerka 29 ee Xeer-hoosaadka Golaha Fulinta ayaa sheegaya in soo jeedinta qofka u magacaaban jagada Xoghayaha Guud lagu sameeyo cod qarsoodi ah iyo cod aqlabiyad fudud inta lagu guda jiro kalfadhiga gaarka ah ee Golaha.
Hadalka “aqlabiyadda fudud, ” taas oo noqon karta marin habaabin, waxaa lagu qeexaa inay u dhigantaa konton lagu daray mid ka mid ah codbixinta (haddii ay dhacdo tiro khaldan, tirada isla markaaba ka sareysa kala badh codadka) oo ay dhiibteen xubnaha Goluhu goobjoogga iyo codeynta.
Xeerku wuxuu leeyahay: “haddii murashax uusan helin aqlabiyadda cod -bixinta koowaad, labaad, iyo haddii loo baahdo waraaqo kale ayaa la qabanayaa si ay u kala gartaan labada murashax ee hela codadka tirada badan ee warqadda koowaad. ”
Haddii ay dhacdo in laba musharrax ay wadaagaan kaalinta labaad, hal ama dhowr kaar oo dheeraad ah ayaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto si loo go'aamiyo cidda labada murashax ee ka qeybgalaya codeynta ugu dambeysa.
Sanadkii 2017, markii 6 murashax ay tartamayeen (kadib 7th mid ka yimid Armenia ayaa ka tanaasulay), doorashada ayaa lagu soo gabagabeeyay codbixintii labaad.
Mr. Pololikashvili ayaa ka guuleystay Mr. Walter Mzembi oo u dhashay Zimbabwe.
Codbixintii ugu horreysay, natiijooyinka waxay noqdeen: Mr. Jaime Alberto Cabal (Kolombiya) oo helay 3 cod, Marwo Dho Young-shim (Jamhuuriyadda Kuuriya) oo heshay 7 cod, Mr. Marcio Favilla (Brazil) oo helay 4 cod, Mr. Walter Mzembi oo helay 11 cod, iyo Mr. Zurab Pololikashvili oo helay 8 cod.
Codbixintii labaad, Mr. Pololikashvili wuxuu helay 18 cod, iyo Mr. Mzembi 15. Mr. Alain St.Ange oo u dhashay Seychelles ayaa isla markiiba ka tanaasulay musharraxnimadiisii.
Yaa u tartami kara Xoghayaha Guud ee UNWTO?
Si aad u noqoto musharax u taagan jagada Xoghayaha Guud ee Ururka Dalxiiska Adduunka, waa inaad buuxisaa shuruudo kala duwan oo aad raacdaa nidaam, kaas oo la qeexay sanadihii la soo dhaafay, laga bilaabo 1984 ilaa 1997.
Waa inaad noqotaa muwaadin waddan Xubin ka ah, oo gobolkani ma ahayn inuu ku urursado arsar aan gar lahayn.
Doorashada Xoghayaha Guud waa tartan u dhexeeya shaqsiyaad, ee kuma dhex jirto waddamada. Si kastaba ha ahaatee, ma jiro qof ku ordi kara dhaqdhaqaaqiisa.
Musharraxiinta waa in ay soo gudbiyaan hay’ad karti u leh Dawladaha Xubinta ka ah (madaxa dawladda, madaxa dawladda, wasiirka arrimaha dibadda, danjireyaal aqoon leh…).
Doorkan “shaandhayn” waa in aan loo tixgelin oggolaansho, taageero, ama xitaa talo ay dawladdu soo saartay, maadaama mararka qaarkood si khalad ah loogu sheego warsaxaafadeedyada ama dukumiintiyada UNWTO.
Erayada waa muhiim: waa si fudud soo jeedin.
Go’aanka CE/DEC/17 (XXIII) ee Golaha Fulintu ka qaateen kal -fadhigiisii ​​1984 -aad ee 23 -kii, kaas oo meel -mariyey habraaca la raacay ilaa maanta, wuxuu dhigayaa: “musharraxiinta waxaa si rasmi ah Golaha loogu soo jeedin doonaa iyada oo loo marayo Xoghaynta dawladaha ay ka soo jeedaan muwaadiniinta… ”
Ma jiro wax aqoonsi ah oo u dhexeeya musharraxa iyo dalka: ma jiro wax qoraal ah oo ku eedeynaya dowlad inay soo gudbiso laba musharax ama ka badan.
Marka la helo murashaxnimada, waxaa lagu wargeliyaa qoraal qoraal ah oo Xoghayntu u gudbiso xubnaha ururka.
Marka la gaaro waqtiga kama dambaysta ah ee helitaanka musharraxnimada (badiyaa laba bilood ka hor fadhiga), dukumiinti waxaa diyaariyay Xoghaynta waxaana loo diraa xubnaha Golaha oo tilmaamaya liiska musharraxiinta ugu dambeeya, iyo u gudbinta dukumiintiyada uu mid walba bixiyo (warqad soo jeedinta ka timid xukuumaddooda, vitae manhajka, bayaanka siyaasadda iyo ujeeddada maamulka, iyo, dhowaan, shahaado caafimaad oo wanaagsan).
Waxay salka ku haysaa dukumentigan, oo sidoo kale xusuusinaya habraacii la raaci lahaa, in la qaato go'aanka Golaha Fulinta ee ku talinta qof u soo magacaaba Golaha.
Waxay u muuqataa inaysan jirin meel liiska rasmiga ah ee kama dambaysta ah ee musharraxiinta oo la soo gudbiyey lagu beddeli karo marxalad dambe.
Si kastaba ha noqotee, dukumintiga CE /112 /6 REV.1 ee la soo saaray 2020 si loogu hago doorashada socota ee Xoghayaha Guud ee muddada 2022-2025 ayaa si la yaab leh u tilmaamaysa “Ansixinta murashaxnimada ee dawladda Dawladaha xubinta ka ah waa shuruud lama huraan ah oo ka bixitaankeedu waxay keenaysaa in laga takhaluso murashaxa ama qofka la magacaabay. "
Tixgelintaani waa ikhtiraac saafi ah oo ka yimid Xoghaynta hadda ee hay'adda.
Suurtagalnimada ka noqoshada soo jeedinta dawladda (ma aha “ansixiyayt, ”sida hore loo tilmaamay, kama dhaceyso qoraal kasta oo quseeya sharciga ama go'aan ka yimid urur kasta - Golaha iyo Golaha - ku lug leh hawsha.
Mala -awaalka aan caadiga ahayn ee ah in qofka la magacaabayo laga reebi karo inta lagu guda jiro geeddi -socodka doorashada, xaalad si caqligal ah u soo rogi doonta talo -soo -jeedin cusub oo Goluhu soo saaro munaasabadda kal -fadhiga soo socda, looma malaynayo - iyo sabab wanaagsan! -
oo aan ku jirin Xeerarka iyo Xeer -hoosaadka labada urur ee ku lug leh.
Tixgelinta la sheegay ee ku saabsan suurtogalnimada in dawladdu ka noqoto soo jeedinteedii intii hawsha lagu guda jiray ayaan ka muuqan dukumintiga CE/84/12 ee la soo saaray 2008 si loogu hago doorashada ka horreeyey Xoghayaha Guud ee hadda ee muddada 2010 -2013, iyo sidoo kale dukumentiga CE/94/6 ee la soo saaray 2012 muddadii 2014-2017.
Waxaa ka sii muhiimsan, waxay ka maqnayd dukumintiga CE/104/9 ee la soo saaray 2016 si loo xukumo hannaanka doorashada muddada 2018-2021.
Waa qoraalkan iyo go'aanka Golaha ee u dhigma kaas oo xukuma doorashada 2017. Xaqiiqda ah in afar sano kadib tixgelin cusub, oo ka soo horjeedda fahamka hore ee habraaca, ayaa la soo bandhigay, waxay u muuqataa mid caqli-gal ah si loo caddeeyo dib-u-dhaqaajinta qaladkii la galay 2017 munaasabadda magacaabista Xoghayaha Guud ee hadda.
Laynka doodda ee kor ku xusan, ka dib taas oo aan meelna ku jirin qoraallada UNWTO iyo ku-dhaqanka ka-noqoshada soo-jeedinta dawladda ee murashaxa Xoghayaha Guud, waxaa ansixiyay borofisar Jaamacadda, madaxweynihii hore ee Maxkamadda Caalamiga ah ee Qaramada Midoobay Caddaaladda, oo muddo 30 sano ah soo ahaa la -taliyaha sharciga ee ururka, oo uu hadda lataliyaha sharciga u ahaa kaaliye.
Sida laga soo xigtay eTurboNews cilmi baaris yaa sharaxay taalada waa Alain Pellet. Waa garyaqaan Faransiis ah oo dhiga sharciga caalamiga ah iyo sharciga dhaqaalaha caalamiga ah ee Université de Paris Ouest - Nanterre La Défense. Wuxuu agaasime ka ahaa Xarunta de Droit International (CEDIN) ee Jaamacadda intii u dhexeysay 1991 iyo 2001.
Pellet waa khabiir Faransiis ah oo ku takhasusay qaanuunka caalamiga ah, xubinna ka ahaa Madaxweynihii hore ee Guddiga Qaanuunka Caalamiga ah ee Qaramada Midoobey, waana lataliye dowlado badan, oo ay ku jirto Dowladda Faransiiska xagga sharciga caalamiga ah ee dadweynaha. Waxa kale oo uu khabiir u ahaa Guddiga Xalinta Khilaafaadka Badinter, iyo sidoo kale wakiilka Guddiga Sharci -yaqaanka ee Guddiga Faransiiska ee Abuuritaanka Maxkamad Dambiyada Caalamiga ah ee Yugoslavia hore.
Wuxuu wakiil ama la -taliye iyo garyaqaan u ahaa in ka badan 35 dacwadood oo la horkeenay Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda wuxuuna ka qaybqaatay dhowr dhexdhexaadin oo caalami ah iyo kuwo caalami ah (gaar ahaan dhinaca maalgashiga).
Pellet wuxuu la xiriiray u beddelidda Ururka Dalxiiska Adduunka (WTO) hay'ad khaas ah oo ka tirsan UN, the Ururka Dalxiiska Adduunka ee Qaramada Midoobay (UNWTO).
Fasiraaddani waa tan keliya ee waafaqsan mabda'a aasaasiga ah ee ku xusan qodobka 24aad ee Xeerarka, in gudashada waajibaadkiisa, Xoghayaha Guud ee Ururka Dalxiiska Adduunka ee Qaramada Midoobay, iyo sidoo kale xubin kasta oo shaqaalaha ka mid ah, ay madaxbannaan tahay isla markaana aan wax tacliin ah ka helin dowlad kasta, oo ay ku jirto isaga ama iyada. Waxa lagu dabaqi karo maamulka hay'adda ayaa ku habboon, mutatis mutandis, si ruuxu u hago tilmaanta.
Sannadkii 2017, mabda'a aasaasiga ah waa la iska indho tiray.
Sidaan hore u soo sheegnay, waxaa jagada Xoghayaha Guud ku tartamayay laba murashax oo Afrikaan ah: Mr. Walter Mzembi oo u dhashay Zimbabwe iyo Mr. Alain St.Ange oo u dhashay Seychelles.
Ficil aan waligeed lagu arag taariikhda UNWTO, bishii Luulyo 2016, arrinta waxaa lagu saleeyay saldhig siyaasadeed, iyadoo go'aanka Midowga Afrika oo ay oggolaatay Seychelles, si loo taageero musharraxa ka yimid Zimbabwe.
Marna hore uma dhicin in hay'ad kale oo caalami ah ay si aan habboonayn u farageliso arrimaha gudaha ee Ururka Dalxiiska Adduunka.
May 8, 2017, maalmo yar ka hor kulankii Madrid ee Golaha Fulinta, Dowladda Seychelles waxay heshay qoraal verbale ah oo ka yimid Midowga Afrika oo dalbanayey in dalku ka noqdo murashaxnimada Mr. St.Ange, iyada oo ay saaran tahay cunaqabatayn adag ururka iyo xubnihiisa.
Dal yar ahaan, Seychelles ma lahayn wax kale oo aan ahayn inay u tanaasusho hanjabaadda, Madaxweynaha cusubna wuxuu xoghaynta ururka ku wargeliyay saacado yar ka hor furitaanka fadhiga Golaha, ka noqoshada soo jeedinta murashaxiisa.
Xubno badan ayaa u arkay qallooca ka dhashay faragalinta Robert Mugabe, Madaxweynaha Zimbabwe, oo dhawaan ka tagay jagada Guddoomiyaha Midowga Afrika iyo “aabaha” madaxbannaanida dalkiisa, isagoo saameyn xooggan ku leh. madaxda Afrika. Dr. Walter Mzembi wuxuu wasiir ka ahaa golihii wasiirrada ee Robert Mugabe.
Markii lagu wargeliyay tallaabada dalkiisa, Dr. Taleb Rifai, oo ahaa Xoghayihii Guud ee UNWTO xilligaas, ayaa lagu boorriyay inuu talo ka raadsado Marwo Alicia Gomez, oo ah la taliyaha sharciga ee UNWTO.
Wuxuu ku wargeliyay in Alain St.Ange uusan sharci ahaan xaq u lahayn inuu sii wado dalabkiisa. Xog-hayaha Guud Taleb Rifai ayaa wali siiyay St.Ange fadhiga kulanka Golaha ka hor intaan la gaadhin ajendaha khuseeya doorashada. St.Ange ayaa jeediyay khudbad qiiro leh oo uu ku dooday sababta loogu ogolaaday inuu tartamo.
Sababaha hore loo soo saaray, waa in la tixgeliyaa in jawaabta lataliyaha sharciga, oo uusan saxin Xoghayaha Guud, ay khalad ahayd.
Way adag tahay in la fahmo sida Xoghayaha Guud ee waqtigiisu dhammaaday uu u tixgelin lahaa, sida uu ku dhawaaqay ka dib, in doorashada habsami u socodka uu masuulka ka ahaa, ay ahayd mid joogto ah.
Ugu yaraan, waxaa jiray shaki xooggan oo ku aaddan u -hoggaansanaanta geedi -socodka, iyo xaqiiqda ah in tani ay ahayd markii ugu horraysay ee dhacdo mawduucan saxda ah ay dhacdo.
Waxay ahayd in arrinta la horgeeyo xubnaha Golaha si ay go'aan uga gaaraan nidaamka la raacayo.
Tani waa wixii uu Guddoomiyaha kal -fadhiga 55 -aad ee Golaha Fulintu ku sameeyay 1997 magaalada Manila markii ay ka dhalatay dhibaato fasiraadda xeerarka doorashada lagu maamulayo.
Markii la waayay murashaxii Seychelles, heshiiska kaararka si lama filaan ah ayaa loo beddelay.
Dr. Mzembi ayaa weli ahaa murashaxa kaliya ee matala Afrika, gobolka ugu codadka badan Golaha.
Wuxuu hogaaminayay codbixinta codbixintii ugu horreysay.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa si cad u adkayd in wakiilka Zimbabwe loo doorto inuu noqdo madaxa hay'ad Qaramada Midoobey markii dalka iyo madaxweynaheeda cunaqabateyn ay saarnaayeen dalal badan, oo ay ku jiraan Mareykanka iyo xubnaha labada Barwaaqo -sooranka iyo Midowga Yurub, waxaana dhaleeceyn kala kulmay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.
Mr. Pololikashvili ayaa dhammaadkii maalintii loo doortay natiijada ka dhalatay diidmadii ku xidhnayd musharraxa Zimbabwe.
Haddii Mr. Alain St.Ange, sida aan halkaan iska yeelyeelno uu xaq u lahaa inuu sidaas yeelo, sii waddo murashaxnimadiisa, sheekadu sida cad way ka duwanaan lahayd.
Bishii Nofembar 2019, Maxkamadda Sare ee Jamhuuriyadda Seychelles waxay aqoonsatay sharcinimada sheegashada uu sameeyay Mr. Alain St.Ange ee la xiriirta dib -ula -noqoshada soo jeedintiisa dowladda.
Iyadoo la tixraacayo xukunkan, Maxkamadda Racfaanku waxay go'aamisay bishii Ogosto 2021 in St.Ange magdhow laga siiyo kharashaadkii uu galay iyo dhaawaca akhlaaqeed ee soo gaaray.
Doorashada Golaha Guud ee UNWTO ee Chengdu, China 2017 - Xadgudubkii Labaad:
Shuruudda qodobka 22aad ee Xeer-hoosaadyada saddex-meelood laba meelood ee Golaha Guud ee magacaabista Xoghayaha Guud ayaa kor lagu sheegay.
Sida ku cad xeerka 43 ee Xeer -hoosaadka Golaha Guud: “Dhammaan doorashooyinka, iyo magacaabista Xoghayaha Guud, waxaa lagu samayn doonaa cod qarsoodi ah. "
Lifaaq ku saabsan Xeerarka Habraaca ayaa dejinaya Mabaadi'da Hagista si ay doorashada ugu qabtaan si qarsoodi ah, taas oo lagu sameeyo adeegsiga waraaqaha cod -bixinta, xubin kasta oo xaq u leh in uu codeeyo, oo markeeda loo yeero.
Haddii mabda'a uu cad yahay, codsigiisu wuxuu kicinayaa dhibaato la taaban karo maadaama codbixinta shaqsiyeed ee hoos timaada habka codeynta qarsoodiga ah ay qaadato waqti badan: ugu yaraan laba saacadood ayaa laga yaabaa in lagu lumiyo ajandaha adag ee Golaha.
Sidaa darteed, marka ficil ahaan ay u muuqato in xubnuhu ka soo baxeen is -afgarad si loo ansixiyo doorashada murashaxa ee ay soo gudbiyeen Golaha Fulintu, Goluhu wuxuu go'aansan karaa inuu dhinac iska dhigo qodobka sharciga ah ee codeynta cod -bixin qarsoodi ah wuxuuna sii wadi doonaa doorashada dadwaynaha qirasho.
Qaabkan wax-qabadka, oo lagu soo guuriyey hannaankii ay raaceen hay'ado kale oo kala duwan oo caalami ah, ayaa u baahan sida ugu horraysa ee loo baahan yahay in la isku raacsan yahay xubnaha dhexdooda oggolaanshaha beddelka.
Haddii kale, dabcan Xeerarka Habka ayaa la jebin doonaa.
Sidaa darteed, fadhi kasta oo Golaha ah, marka laga bilaabo ka doodista qodobka ajendaha ee magacaabista Xoghayaha Guud, Madaxweynaha Golaha, isagoo akhrinaya warqad ay soo diyaarisay Xoghayuhu, wuxuu xubnaha ku wargeliyaa habka in la raaco, iyadoo la duubayo in marar kala duwan magacaabista lagu sameeyay dhawaaq, laakiin waxay ku adkeysaneysaa in haddii hal xubin uu codsado inuu ku dheganaado bixinta qaanuunka ee codeynta qarsoodiga ah, midkani wuxuu u dhaqmi doonaa sida saxda ah.
Sidaas ayay dooddii doorashada Xoghayaha Guud ku bilaabatay Sebtember 2017 Golaha Guud ee lagu qabtay Chengdu.
Waxay ku bilaabatay in Guddoomiyuhu akhriyo dukumintiga oo sharxaya nidaamka la dhawrayo. Ka dib su'aasheeda ah in xubin kasta uu ka soo horjeedo cod -bixinta oo uu codsanayo in si adag loo ilaaliyo Xeerarka, Madaxa ergada Gambia ayaa weydiistay hadalka wuxuuna ku baaqay cod qarsoodi ah.
Waxay ahayd in ciyaartu dhammaato, doodu halkaas ha ku ekaato, codbixinta qarsoodiga ahna waa in la bilaabo.
Tani ma aha waxa dhacay!
Ergooyin badan ayaa sameeyay faragelin qiiro leh, ha ahaadeen kuwo ku taageeray codka cod -bixinta ama ku baaqay in la ixtiraamo Xeerarka. Faahfaahinta waxaa la weydiiyay la taliyaha sharciga iyo Xoghayaha Guud.
Halkii sharciga uun la dhihi lahaa, dheereyntoodii, dabacsanayd, iyo, ugu dambayntii, faallooyin aan waxtar lahayn ayaa sii murmay dooddii.
Dooddii aan dhammaadka lahayn ayaa noqotay mid kacsan oo marba marka ka dambaysa sii murugsan.
Sida iska cad, wufuudda taageersan Mr. Mzembi, gaar ahaan kuwa Afrikaanka ah, waxay isku dayayeen inay helaan saddex meelood meel codadka taban, si ay caqabad ugu noqdaan doorashada qofka la magacaabay, oo ay ku soo rogaan magacaabis cusub Golaha Fulinta, iyo kuwa raalli ka ah doorashada Mr. Pololikashvili ama ka baqaya soo noqoshada musharraxa reer Zimbabwe waxay ku adkaysanayeen baahida loo qabo in cod lagu dhawaaqo, si “muujiyaan midnimada ururka. "
Xaqiiq ahaan, sababta oo ah aqoon la'aanta xeerarka ee Guddoomiyaha, hoggaan aan la hubin oo ka socda Xoghayaha Guud, iyo waxqabadka daciifka ah ee la-taliyaha sharciga UNWTO MS Gomez midnimada ururka ayaa runtii halis ugu jirtay taas waqti.
Xog-hayaha Guud iyo la-taliyaha sharciga ayaa xasuusan kara in isla dooddii hanaanka ay dhacday 16-kiith kalfadhigii Golaha Guud ee lagu qabtay 2005 Dakar.
Sidii magaalada Chengdu oo kale, dood murugsan oo ku saabsan codaynta suurtogalnimada ku dhawaaqisteeda ayaa bilaabatay.
Sidii Chengdu, hal ergo - Spain - waa diidday, laakiin wufuud badan ayaa weydiisatay hadalka.
Xoghayihii Guud ee xilligaas, oo mar kale u tartamayay doorashada, ayaa soo farageliyay, xitaa haddii aysan dani ugu jirin, maadaama cod ku dhawaaqis ay tahay habka ugu sahlan ee aan mucaarad loo yeelan. Wuxuu dib u xasuustay qoraalka qodobka 43aad ee Xeer -hoosaadka wuxuuna caddeeyay in mar haddii hal dal oo keliya, oo ah Spain, uu codsaday cod qarsoodi ah, in dooddu dhammaatay.
Codbixinta qarsoodiga ah ayaa dhacday, si lama filaan ah, kan hadda xilka haya ayaa dib loogu doortay boqolkiiba 80 codadkii.
Marka laga hadlayo doorashada Xoghayaha Guud ee Golaha Guud, qoraallada UNWTO meelna uma bannaana shaki, illaa 2017, dhaqanka Hay'adda ayaa guud ahaan waafaqsan qoraalladan.
Doorashada Chengdu waxay ahayd waqti murugo leh taariikhda Ururka Dalxiiska Adduunka ee Qaramada Midoobay.
Intii lagu guda jiray nasashada doodda, heshiis ayaa la soo gabagabeeyay: beddelkii aqbalaadda cod-qaadista, ergo ayaa loo xilsaaray Mr. Walter Mzembi si uu u soo jeediyo dib-u-habayn lagu sameeyo hannaanka magacaabista ee Xoghayaha Guud-hawlgal taas oo, dabcan, aan lahayn dabagal.
Mr. Pololikashvili iyo Mr. Mzembi ayaa masraxa u fuulay sacab iyo mashxarad xubnaha intooda badan, kuwaas oo, dhawr ilbidhiqsi ka hor, si miyir qaba ama aan ahayn, ku xadgudbay Xeerarkii Machadkooda.
Marka la eego xulashada qofka la magacaabayo ee Madrid, haddii xeerarka lagu ixtiraami lahaa doorashada Chengdu, sheekada iyo qofka masuulka ka ah UNWTO ayaa laga yaabaa inay kala duwan yihiin.
Dunida Dalxiiska ayaa hadda fiirineysa Golaha Guud ee UNWTO ee soo socda si loo saxo xaaladda, iyo in dalxiisku uu mar kale noqdo ciyaaryahan caalami ah oo xooggan.
Tani waxay si gaar ah lagama maarmaan u tahay in lagu hago warshadan nugul waqtiga COVID-19 kadib. Waxay u baahan tahay hoggaan adag iyo lacag badan.